यू-१९ विश्वकप छनाेट : डिएल मेथडको आधारमा नेपाल युएईसँग १ रनले पराजित -
खेलकुद मुख्य खबर
यू-१९ विश्वकप छनाेट : डिएल मेथडको आधारमा नेपाल युएईसँग १ रनले पराजित
३० चैत्र २०७५, शनिबार गोक्यो संवाददाता0Comments
काठमाडौं : आइसीसी यू–१९ विश्वकपको एशिया छनोटमा नेपाल एक रनले पराजित भएको छ आज भएको खेलमा नेपालले युएईसँग डकवर्थ एण्ड लुइसको नियमका आधारमा नेपाल एक रनले हारेको हो ।
किनरारा ओभल मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले ५० ओभरमा २ सय ४७ रन बनाएको थियो । नेपालले सुरुवात राम्रो गर्न सकेन । २२ रन हुँदा नेपालका ओपनर पवन सराफ ब्यक्तिगत १२ रनमा आउट भए । त्यसपछि दोस्रो विकेटका लागि रित गौतम र आसिफ शेखले ४७ रनको साझेदारी गर्दै सम्हाल्ने प्रयास गरेका थिए । तर आसिफ २७ रनमा आउट भएपछि नेपालले ६९ रनमा दोस्रो विकेट गुमायो ।
त्यसपछि कप्तान रोहितकुमार पौडेल पनि ब्यक्तिगत १८ रनमा पेभेलियन फर्किदा नेपालले स्कोरबोर्डमा ९७ रन बनाएको थियो । त्यसपछि भने नेपालले अरु १८ रन जोड्दा थप दुई विकेट गुमायो । जसका कारण नेपालले एक सय १५ मा ५ विकेट खेर फाल्यो । सन्दिप जोरा मात्र चार रनमा आउट भए भने रित गौतम ४४ रनमा पेभेलियन फर्किए ।
छैटौ विकेटका लागि डेब्यु गरेको हरी चौहान र भिम शार्कीले ९२ रनको साझेदारी गर्दै टिमलाई बलियो स्थितीमा पुर्याए । तर भिम ५३ रनमा आउट हुन पुगे । उनले ५४ बलमा चार चौका र दुई छक्का प्रहार गरेका थिए । तर यी दुई खेलाडीको साझेदारी टुटेपछि नेपालका पारी एका एक कमजोर बन्यो । नेपालले दुई सय २४ रन बनाउदा नौ विकेट गुमायो । पुछारका खेलाडी कुशल मल्ल र रासिद खान एक एक रनमा आउट भए भने कमलसिंह ऐरीले मात्र दुई रन बनाए । नेपालका लागि आज डेब्यु गरेका हरी चौहानले अर्धसतक बनाए । उनले अविजीत ६७ रनको पारी खेले । बलिङमा युएईका रिसव मुखर्जीले चार विकेट लिए ।
नेपालले दिएको दुई सय ४८ रनको लक्ष्य पक्ष्याएको युएइको स्कोर एक सय २२ रनमा तीन विकेटको अवस्थामा भारी बर्षा भएको थियो । जसका कारण खेल संभव हुन सकेन । त्यसअघि युएईल ५ रन हुँदा हुदा पहिलो विकेट गुमाएको थियो भने २१ रन हुँदा दोस्रो विकेट झर्यो । तर तेस्रो विकेटका लागि कप्तान अन्स तन्डोन र भ्रित्या अरविन्दले दरिलो साझेदारी गर्दा नेपाललाई राम्रो चुनौती पस्किएको छ ।
टिम दबावमा रहेका बेला यी दुई खेलाडीले सतकिय साझेदारी गर्दै टिमको पारी राम्रोसँग सम्हाले । जसमा कप्तान अरविन्दले अर्धसतक प्रहार गरे । तर युएईको स्कोर एक सय २२ रन हुँदा नेपालले यो साझेदारी तोड्न सफल भयो । उसका अन्स टण्डनलाई सागर ढकालले ५४ रनमा आउट गरे । त्यसपछि बर्षाभएपछि खेल डीएल मेथोडबाट नतिजा निकालिएको थियो । जसमा नेपाल एक रनले पराजित भयो । जितसँगै युएईले दुई खेलमा चार अंक बनाउदै अंकतालिकाको शिर्ष स्थानमा छ ।
← यस्ता गुणका महिलासँग सँगत या बिहे गरे भाग्य खुल्ने छ !!!
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : यो एक वर्षमा के नै भयो र ? होइन, ‘यो वर्ष के के भए ?’ भनेर सोध्नुस् →
फिफा विश्वकप २०१८ मा नेपालका कुन कलाकार र खेलाडीको समर्थन कसलाई ?
३१ जेष्ठ २०७५, बिहीबार गोक्यो संवाददाता 0
नेपालले युएईलाई दियो २४८ रनको लक्ष्य
३० चैत्र २०७५, शनिबार गोक्यो संवाददाता 0
झापाको शिवसताक्षीमा आगलागीमा परेर एकै परिवारका चारजनाको मृत्यु
१० मंसिर २०७५, सोमबार गोक्यो संवाददाता 0